I-Shuangliang iphumelele i-TUAS IWMF yeProjekthi yeZityalo zeNkunkuma eSingapore |
Kutshanje, uShuangliang ufumene ileta yokwamkelwa (i-LOA) evela eSingapore ST Marine ngokubhekisele kunikezelo lokubhida nge-condenser yomoya opholileyo kwi-TUAS IWMF yeprojekthi yokulahla inkunkuma. Iprojekthi ibekwe eSingapore kunye nesixa-mali esiphumeleleyo malunga ne-CNY ye-48 yezigidi (ngaphandle kwerhafu).
Iprojekthi ye-TUSA IWMF isungulwe ngoJulayi 2019, ngonxibelelwano oluqhubekayo kunye nentsebenziswano nomnini kunye ne-EPC. Icandelo lamazwe aphesheya kwe-Shuangliang Eco-energy kunye ne-arhente yayo ekhethekileyo eSingapore ebizwa ngokuba yi-Cyclect (ngokudibeneyo neShuangliang Cooling System Co, Ltd) yamkelwa ngumthengi kwizisombululo zayo zobuchwephesha kunye nokuphendula kwangoko. Ukuhlolwa kunye nokwamkelwa kwale projekthi kulindeleke ukuba kugqitywe ukuphela kwe-2023.
Iprojekthi yeSingapore TUAS IWMF yokutsala amandla okutshisa inkunkuma ityalwe yiArhente yeSizwe yokusiNgqongileyo yaseSingapore ngokutyala imali eyi-1.5 yezigidigidi zeedola zaseMelika. Kucetyelwe izigaba ezibini, isigaba ngasinye ukuvelisa amandla e-2X65MW ngamandla okucoca inkunkuma ukuba ibe ziitoni ezingama-2,900 / ngosuku. Xa iprojekthi igqityiwe, iya kuba sesona sityalo sikhulu sokutshisa inkunkuma eSingapore nkqu nakwi-mpuma yeAsia iphela. UShuangliang uphumelele ibhidi yenqanaba lokuqala leprojekthi, kwaye inkampani ephumelela ibhidi yesigaba sokuqala iya kuba nokubaluleka okuphumelela ibhidi yesigaba sesibini.
Kwakungekho lula ukuphumelela ibhidi yale projekthi. Ubunzima obahlukeneyo obungalindelekanga benzekile ngeli xesha, ekuqaleni kuka-2020, ukuqhambuka ngesiquphe kwe-COVID-19 kuzise ubunzima obukhulu kunxibelelwano. Ngeli xesha, la maqela mabini abandakanyekayo kolu thethwano aye aqondana ngokupheleleyo kwaye ke le projekthi iphunyezwe kakuhle. Okwangoku, ukwehla okubukhali kwedola yaseMelika kwazisa uxinzelelo olukhulu eShuangliang. Emva konxibelelwano oluqhubekayo nomthengi, ekugqibeleni uShuangliang waphumelela ekoyiseni i-EPC ukuba ivume ukwamkela i-CNY njengemali yokuhlala. Kuwo omabini la maqela, nangona uninzi lwezinto eziphazamisayo zibangelwe kukuqhambuka kwe-COVID-19, ukuthembana kunye nempembelelo yamazwe aphesheya kwe-Shuangliang kuye kwaphuculwa kakhulu kunxibelelwano lwe-Intanethi kunye nokunxibelelana ngalo lonke elixesha lothethathethwano.
Ukuphumelela kwebhidi lixesha lokuqala ukuba into epholileyo yomoya kaShuangliang ingene kwimakethi yaseSingapore, eqhekeza ulawulo lwexesha elide lwabakhuphiswano kwimakethi yaseSingapore. Ayizukunceda kuphela ekuphuculeni ifuthe lophawu lweShuangliang, kodwa iza nokubaluleka kwesicwangciso phesheya. Ngaphaya koko, ngokuphumelela kokubhida, ukubonakalisa okugqwesileyo kufezekisiwe ekwandiseni imarike kwiprojekthi yokuvelisa umbane ongasebenzisi shushu.
Kwixesha elizayo, iCandelo laMazwe ngaMazwe laseShuangliang liyakuthatha le projekthi njengethuba lokoyisa ngokupheleleyo ifuthe leCovid-19 kwaye yomeleze ukwandiswa kweemarike kwento epholileyo ephefumlayo kwimakethi yaphesheya, ikhuthaza ukonga umbane kunye neemveliso zokonga amanzi Kunye nefilosofi yayo 'yokuvelisa okrelekrele' kwihlabathi. UShuangliang ukholelwa kwelokuba ukuphumelela kwale projekthi kuyakwenziwa njengomzekelo olungileyo kwilizwe jikelele 'yencopho yekhabhoni kunye nokungathathi cala kwekhabhoni'.